सुजनलाई कसले कसरी जिउन सिकायो ? हेर्नुस् भिडियो
काठमाडौं । जसको कला छ, उ सधैं सबैको प्रिय बन्छ । जसको गला छ, उ सधैं गायन मै रहन्छ । मिठा मिठा गीत संगीत पस्कि रहन्छ । आफ्ना स्रोतालाई केही न केही मनोरञ्जन दिइरहन्छ ।
१५ वर्षदेखि नेपाली लोक दोहोरीको क्षेत्रमा लागेका सुजन बराइली आफ्नो कला र गला कै कारण नेपाली सांगीतिक दुनियामा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका छन् । उनले झण्डै डेढ दर्जनभन्दा बढीमा गीतमा स्वर दिएका छन् भने त्यति नै संख्यामा संगीत भरेका छन् ।
पर्वत जिल्लाको मल्लाजमा २०४१ मा जन्मिएका बराइलीले यतिवेला लोक दोहोरीका पारखीहरुका लागि नयाँ लोक दोहोरी गीत ल्याएका छन् । उनले भर्खरै बजार ल्याएको ‘जिउन सिकायो’ बोलको गीतले बजार तताएको छ । ‘जिउन सिकायो’ बोलको गीतमा उनलाई पूर्णकला बिसीले साथ दिएकी छन् ।
‘जिउन सिकायो’ सुजन आफैँले लय तथा शब्द सिर्जना गरेका हुन् । यो गीतलाई मल्लाजी म्युजिकले बजारमा ल्याएको हो । नसामा पनि जिउन सिकिन्छ भन्ने सन्देश बोकेको सो गीतको म्युजिक भिडियोलाई जीवन सेन्चुरीले निर्देशन गरेका छन् । यसमा सुजन, दुर्गामाया, सुवास लगायतलाई म्युजिक भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
सुजन कलाकार मात्रै होइन, समाजसेवी पनि हुन् । उनी सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै लागेका छन् । अनाथ, असहाय, गरिब र दुःखी बालबालिकाहरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । त्यही भएर उनी धेरै पटक सम्मानित पनि भइसकेका छन् । देशविदेश घुमेका छन् ।
गीतको म्युजिक भिडियो एउटा भट्टी पसलमा छायांकन गरिएको छ । दृष्य हेर्दा जड्याहा जस्तो देखिए पनि यसभित्र पीडा छन्, वेदना छन् । उनले आफ्नो नयाँ गीत ‘जीउन सिकायो’ मा पनि जीउनलाई मान्छेले केके गर्नुपर्छ ? कस्ता कस्ता समस्या झेल्नुपर्छ ? लगायतका पीडा र वेदना पोखेका छन् ।
‘तिमीलाई देखेर’ मा देखिए शिल्पा र उत्तम (हुर्नुस् भिडियो)
काठमाडौं । गायक तथा संगीतकार उत्तम विक्रम विष्ट र गायिका सिर्जना गुरुङको नयाँ गीत ‘तिमीलाई देखेर’...
‘जिन्दगी नै भन्दिनँ’ मा बोल्ड अवतारमा झरनाकी छोरी सुहाना
काठमाडौं । नाम चलेका कलकारका सन्तान फिल्म क्षेत्रमा आउनु कुनै नौलो होइन । पछिल्लोपटक नायकिा झरना ...
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा लोक गीतले बजार तताउन थालेको छ । यही बेला फेरि अर्काे लोग गीत ‘रोल्पा मेर...
यस्तो छ सुहाना र अनमोल अभिनित 'ए मेरो हजुर ३' को गीत (भिडियोसहित)
काठमाडौं । फिल्म 'ए मेरो हजुर ३'को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। अभिनेत्री झरना थापाकी छोरी सुहाना थ...
‘जाउँला बरीलै’मा यस्तो देखियो बब्लु र रुबिनाको माया (भिडियोसहित)
काठमाडौं। गायिका बिष्णु माझी र गायक भागीरथ चलाउनेको आवाजमा लोकदोहोरी गीत ‘जाउँला बरीलै’ बजारमा आए...
‘जाईरा’मा नम्रता श्रेष्ठको नयाँ लुक्सः भदौ ६ गते रिलिज
काठमाडौं । नायिका नम्रता श्रेष्ठले मिक्स मार्शल आर्ट खेलाडीको भूमिकामा अभिनय गरेको नेपाली चलचित्र...